Unomathotholo noncwadi I. Iinkqubo zoncwadi zikanomathotholo wangoku | Uncwadi lwangoku
Unomathotholo noncwadi I. Iinkqubo zoncwadi zikanomathotholo wanamhlanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Imbali yoncwadi, Iincwadi, Ilizwe ledijithali, Inoveli
Irediyo ibisoloko ikho. Kokulungileyo nokubi. Kula maxesha asichukumisileyo, nawo akasilelanga. Ubudlelwane bakhe noncwadi kubalulekile. Ukusuka kwi-opera yokuqala yerediyo ukuya kwezi mabali a kunye netekhnoloji yangoku ye ipodcast Iifayile zeaudiyo ezinokukhutshelwa zemixholo eyahlukeneyo, ikamva labo lokuchaphazeleka lisaqinisekisiwe. Oku yi uphononongo kwezinye ze iinkqubo zoncwadi esinokuyifumana.
1 Iinkqubo zerediyo
1.1 Isikhululo esiluhlaza
1.2 Ithala leencwadi elisisiseko
1.4 Amaqamza ephepha
1.5 Iincwadi zesanti
1.6 Amaphepha ebali
1.7 Iincwadi ezininzi
2 I-podcast yoncwadi
2.1 Imilana entle
2.2 Iingqondo zokoqobo
2.3 Iminyaka Eliwaka
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu UIgnacio Elguero. Kwi-RNE. NgeCawa ukususela ngo-15: 00 emva kwemini ukuya ku-16: 00 emva kwemini
Phantse Iminyaka engama-20 emoyeni apho iyaqhubeka ngenjongo yokuqhubeka nokuzisa uncwadi kubemi, kunye nokuqhubeka nokuba yindawo yokuhlangana yabathandi bokufunda. Abafundi ngabalinganiswa abaphambili kunye ne ukusasazeka kokufunda kunye neencwadi. Bajongana nayo yonke into: iintsomi, amabali amafutshane, iinoveli, imibongo, udliwanondlebe, iipoloti kunye neengxelo. Kwaye banazo space enikezelwe kubantwana.
Ithala leencwadi elisisiseko
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu UEstere de Lorenzo. KwiRadiyo 5. NgeCawa ngo-11: 10 kusasa
Khangela hlambuluka Ingqondo ye u kufunda kwaye ukhethe ezisisiseko eziyinxalenye yelifa lethu lenkcubeko.
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu U-Leticia Audibert. KwiRadiyo 5. NgoMvulo ngo-16.55: 18.11 emva kwemini nangeCawa ngo-XNUMX: XNUMX emva kwemini.
Bayafumana kwaye banike Izindululo zoncwadi lwabantwana nolutsha ukuze wonke umntu onomdla wokufumana abantwana nabantu abancinci banomdla wokufunda bazi apho baqala khona ukujonga.
Ngaphezulu kweminyaka engama-30 ndisemoyeni, UFélix Linares kunye noKike Martín, kwi Ewe, ewe, baqhuba le noveli kunye nenkqubo yokubhala yabalobi.
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu USusana Santaolalla. Ngoonomathotholo 5. NgooLwezithathu ukusuka ngentsimbi yesi-16: 00 emva kwemini ukuya ngeye-16: 30 emva kwemini Kwakhona kwiRadiyo kaZwelonke, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukususela ngo-22: 30 ukuya ku-23: 00 ebusuku.
Indawo yokubhala Imizuzu ye30 Apho unokufumana khona zonke iintlobo kunye nezitayile, ezivela kwiiklasikhi, amanani amatsha kunye nezinto ezintsha.
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu UManuel Pedraz. NgeCawa ukusuka ngo-13: 45 emva kwemini ukuya ku-14: 00 emva kwemini e-RNE Andalucía.
Inkqubo efana ukunyusa umgangatho wokufunda Ye-RNE eAndalusia. Yazalwa ngo-1993. Ihlala iquka udliwano ndlebe, uphononongo lwe izinto ezintsha ezimbini Uncwadi, ebanzi evulwa ngayo inkqubo kunye nemfutshane kwiqweqwe, kunye ingcebiso ngomphulaphuli ngeleta.
Ikhokelwe kwaye yenziwa ngu IMacarena eBerlin. Kwi-Cadena Ser. NgeMigqibelo ukusuka ngo-2: 00 ukuya ku-3: 30 iiyure.
Con udliwano-ndlebe kubabhali kunye namacandelo e ukufunda ngokunzulu Umsebenzi woncwadi lwendalo iphela ngu Umfundisi uFran, la ulwazi ubuntatheli obunika UAntonio Rubio okanye Imbali yamabali iinoveli umbhali athi azinike ilizwi Indawo ye-Espido.
Benze ifayile ye ngaphezulu kwesithuba esikhulu ekusebenziseni umxholo yenziwe kwaye ikhutshwe ngaphezulu kwe-intanethi. Ezinye zazo zezi:
Inkqubo kanomathotholo ukukhuthaza ukufunda yenziwe kwi 2010 liqela labafundi bobuntatheli abasuka kwiYunivesithi yase Valladolid (UVictor Gutiérrez, uSamuel Regueira, u-Ignacio Pillonetto kunye noSergio Pascual). Veki nganye bahlalutya iklasi yoncwadi lwehlabathi.
Sele behamba ngesahluko 60 kwaye une ngamaxesha malunga iiveki ezimbini. Bayayiphatha UAna noMixtega, dos ndiyakuthanda uncwadi ngubani oyidalele abathandi beencwadi njengabo. Bazinikele ekuphawuleni ngeencwadi abazifundileyo ngohlobo lwencoko.
Izahluko zayo zihlala zihlala inde kakhulu, kunye nezinye ezingaphezulu kweyure, ezinokuthi zithathe umva kancinci. Kodwa kholwa Umoya olunge kakhulu kwaye, kuyo nayiphi na imeko, unokukhetha ukumamela kwezona zinto unomdla kuzo.
Nge isitayile esiqhelekileyo kunye komhlaba kukho le podcast kwifomathi yodliwanondlebe nababhali. Iqhutywa ngumdwebi wekhathuni UDariyo Adanti kunye nombhali IAlba Carballal Kwaye wazalwa kwiqonga le-Intanethi uPhi Beta Lambda. Ziinkqubo ngaphezulu kweyure ubude ngesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Unomathotholo noncwadi I. Iinkqubo zoncwadi zikanomathotholo wanamhlanje
Uyibhala njani incwadi